BBEdit vhezheni 14.0: Iyo hombe kuvandudza pane macOS yechirongwa ichi | Ndinobva mac
BBEdit vhezheni 14.0: Iyo hombe kuvandudza pane macOS yechirongwa ichi
Manuel Alonso | 22/07/2021 12:00 | Mac App Store
BBEdit ndeye Nyanzvi HTML uye zvinyorwa edhira MacOS. Ichi chigadzirwa chinopa mubairo chakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa nevanyori vewebhu, vanyori, uye vanogadzira software. Inopa huwandu hukuru hwemabasa ekugadzirisa, kutsvaga uye kugadzirisa, semuenzaniso kodhi kodhi, uye zvinyorwa zvemashoko. Shanduro 14.0 yakaunza huwandu hwekuchinja, kusanganisira kubatsira vashandisi kuronga zvinyorwa zvakanyorwa nekukurumidza. Chingave chiri chikuru kuvandudza kuchirongwa kubvira dzokera kuMac App Store.
Mapurogiramu achafara neiyi nyowani vhezheni yeBBEdit ye ​​macOS
Bare Bones Software's BBEdit yakanyanyisa kujekesa meseji edhita zvakare inosanganisira zvinobatsira kwazvo ma programmers. Zvekuvandudza kune vhezheni 14.0, ivo vanogadzira vaisanganisira runyorwa rurefu rwemabasa uye tweaks kune chishandiso. Kune avo vasina kujairika mumunda wekodhi, zvine mutsindo shanduko hombe ndeye manotsi, ndiko kuti, mafaera akagadzirwa nekukurumidza kutora manotsi kwete magwaro akazara. Iyo ficha inongo chengetedza yega yakanyorwa seyetsamba, ine auto-inogadzirwa zita zvakare, kudzivirira vashandisi kubva kuve nemakumi mazhinji asina mazita mafaira mufaira.
Isu tinoziva kuti vazhinji vevatengi vedu vanogadzira huwandu hukuru hwemapepa asina mazita ekukurumidza kunyora kutora uye kuvimba nekufungidzirwa kugadzikana uye kwakasimba kupora kupora kweBBEdit kuchengetedza basa ravo. Isu takawedzera nyowani "Zvinyorwa" chimiro muBBEdit 14, iyo inopa dzakasiyana nzira dzekugadzira zvinyorwa izvo zvinongo chengetwa Uye, pamwe zvinonyanya kukosha, iwo anozvitumidza mazita kuitira kuti iwe usazopedzisira uchishamisika kuti ndeapi eako 305 "asina zita zvinyorwa" zvinyorwa izvo zvauri kutsvaga.
Panzvimbo iyoyo kana chako chiri chekuvandudza, iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvigadziriso mumitauro yakanangana nemitauro. Tsananguro yakavandudzwa yekutsvaga basa, rubatsiro rwekutsanangudza parameter yebasa, mamwe maficha ekufambisa kodhi, kuwonesa hwindo kumatambudziko e syntax uye semantics, uye kugadzirisa zvinyorwa zvemitauro.
Iko shanduko mhedzisiro yekuvakirwa-mukati kutsigira iyo mutauro server protocol, uko mutauro unoiswa-mushandisi "maseva" anoraira maitiro anonzwisisa mutauro. Izvi zvinobvumira chishandiso kushandura mashandiro ayo zvichienderana nemutauro urikushandiswa. Mitauro mitsva inotsigirwa inosanganisira Go, R, Rust, Lisp-yemhuri mameseji mafaira seClojure uye Pstrong Universal Scene Tsananguro (USD).
Mamwe emabasa izvo zvinogona kuitwa ndeizvi:
Shanda sezvaunoda iyo raira mafaera, maforodha, disks uye maseva
Nakidzwa neiyo zvinyorwa zvemasimbaose
Inosangana nematanho e zvinyoronyoro kubatanidza mune zviripo zvekufashukira
Smart interface kupa nyore kuwana kune akanakisa-mukirasi
Tsvaga uye kutsiva mune akawanda mafaera
Zvirongwa zvekutsanangura chirongwa
Syntax yezvakawanda sosi kodhi mitauro kodhi kupeta
FTP uye SFTP
Kuenderana ne macOS Unix kunyora
Mavara uye kodhi kupedzisa
Zvishandiso zve HTML markup.
BBEdit inopa 30-zuva rekuongorora nguva. Munguva iyoyo, mabasa ese aripo. Mushure menguva yekuongorora, zvese zvakasarudzika maficha anogona kugoneswazve nekutenga rezinesi kana kunyorera paMac App Store. Kana iwe wanga uchingoshandisa BBEdit mune yemahara modhi, isu tinongofanirwa kurodha pasi uye nekuisa iyo nyowani vhezheni. Izvi zvichatipa iwo matsva-mazuva makumi matatu ekuongorora nguva kuti iwe ugone kuyedza ese matsva maficha.
Kana iwe uine rezenisi rakabhadharwa reBBEdit 13.5.7 kana chero yapfuura shanduro yekutengesa yeBBEdit, kusimudzira kunogona kutengwa. Zvino isu tinofanirwa kucherechedza izvozvo Mac App Store vatengi vanofanirwa kucherechedza chinhu chimwe:
Kana iwe uine anoshanda BBEdit kunyorera, iwe unobva wakwanisa kuwana ese epamberi maficha eBBEdit 14. Izvi hazvichinje nguva yekunyorera.
Chirongwa ichi chinoenderana neApple Mac M1. Saka hapazove nedambudziko nematemu matsva ekambani. Zvino, maererano nezvinodiwa zvehurongwa, gara uchiziva kuti zvinodikanwa kune iyo B vhezheni.BEdit 14 inomhanya pane macOS 10.14.2 kana gare gare, kunyangwe 10.14.6 kana gare gare ichikurudzirwa.
Unogona kudhawunirodha chirongwa ichi kubva kune yepamutemo peji kubva kune vanogadzira kana kubva kuMac App Store. Newewo une kuwana bhuku racho yeiyo chirongwa kuitira kuti iwo mabasa matsva ajekese kwauri kana kana iwe uchida kutanga munyika ino. Chirongwa chakanaka chinowanikwa kune wese munhu ane yekuvandudza nyowani nyowani izvo zvichafadza avo vanoshaiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » BBEdit vhezheni 14.0: Iyo hombe kuvandudza pane macOS yechirongwa ichi
Apple Music kuitisa yepamhepo kutenderera chiitiko pachiitiko cheKayne West's new album yemangwana mangwana China
Yakakosha kuchengetedzeka yekuvandudza macOS Mojave neCatalina